ရေစင် ဆောက်လုပ်ခြင်း - Myanmar Builders Guide
ရေစင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖောင်းဒေးချင်း ခိုင်ခန့်ဖို့. လိုပါတယ် ရေစင်မြင့်လေ ဖောင်ဒေးချင်း သတိထားရလေ ဒါကြောင့်ရေစင်ဖောင်ဒေးချင်း တူးရာတွင် ငွေကုန်သက်သာဖို့ မကြည့် ကြပါနှင့် မတော်လို့ တစ်ဖက်ယိုင်သွားရင် လုပ်တဲ့သူလည်းမျက် နာပျက်သလို ပိုင်ရှင်လည်း ငွေကုန်တာနှစ်ခါ အဖြစ် သ့ို ရောက်ရလေတယ်။
အဲတာကြောင့် ဖောင်းဒေးချင်း ကို ရေစင်နှင့်လိုက်အောင် စိတ်ချရအောင်တူး ကြပါလို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။အခု အောက်ပါပုံတွင်ရေစင်က နှစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ် အမြင့် ၁၄' ပေရှိပြီး အကျယ် က ၆' ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ် ဖောင်းဒေချင်းက မြေသား မာတဲ့အတွက်ကြောင့် ၂' ပေခွဲ တူးပြီး အပေါ် ၁ 'ပေ ထိ အုပ် ၉ ရိုးစီထားပါတယ် ေးအာက်ရေကန်အမြင့်က ၅' ပေရှိပြီး အပေါ် ရေကန်အမြင့် က ၄' ပေခွဲ ပြုလုပ်ထားပါတယ် ကန် ကျယ်၍ ရေဖိအားကြီးလာနိုင်သဖြင့် ရေအုပ်ကန်ကို အလယ်ကတစ်ခန်း ခွဲထားပါတယ် အပေါ်ကန် အောက် ကန် နှစ်ခုလုံးမှာ အလယ်က အခန်းခွဲထားပါတယ် "
ရေအုပ်ကန် ကိုမာဆလာ ချိုးတဲ့အခါ မာဆလာ ၅ မူး အထူရှိဖို့ နှင့် အုပ်စီတဲ့အခါ မာဆလာကို သတိထားပြီး နာပြည့်အောင်ထည့်သိုက်ပေးပါ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အလေ့အထ မရှိသည်ဖြစ်စေ အုပ်ကို ပက်လက် စီ ပေးပါ မှောက်စီတာ ထက်ရေလုံတာကတော့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီးမှ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ကို မှောက်ပြီးစီတာနှင့် ပက်လက်စီတာ. ဘာကြောင့်ကွာသွား တယ်ဆိုတာ ကတော့ အုပ်တစ်ခဲ့မှာ နံပတ် တံဆိတ်ခွက်လေးရှိပါတယ် အဲခွက်လေးကို.အောက်ကိုမှောက်စီ လိုက်သော အခါ အုပ်ခွက်လေးရဲ့ အနည်း ငယ် လေခိုခြင်းတို့ကြောင့်ပါ၊ အခြားသော နံရံ တွေမှာ အုပ်ကိုမှောက်ပြီးစီတာက ရေလျှောင်ထားတာ မဟုက်လို့ သတိမထားမိတာပါ။
အုပ်ပက်လက်စီ ရခြင်းကတော့ အုပ်မှာပါတဲ့ အခွက်လေးကို မာဆလာ တင်လိုက်တာနှင့် ပြည့်သွားပြီလေ အဲတာကြောင့် လေခို တယ်ဆိုတာ ကင်းသွားပြီး မှောက်စီတာထက် ပကလက်စီတာ ရေလုံကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရေကန်လုပ်ပြီး ၃ရက် ၄ရက် လောက် ရေ နည်းနည်းလေး စိမ့် ပေမဲ့ ၇ ရက် တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် ကွန်ကရစ် အသားကျသွားပြီးရေမစိမ့် နိုင်တော့ပါ ၊ရေများများစမ့်ပြီး. စီးဆင်းနေကတော အုပ်နာ မလုံ လို့ > မာဆလာ ပါးလို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ရေအုပ်ကန်လုပ်မယ်ဆိုရင် နာ.လုံဖို့လည်း အထူးသတိထားပြီးပြုလုပ်.ဖို့လိုအပ်ပါသည်.။
Read 400 times	Last modified on Wednesday, 28 October 2020 16:38